बिहानको खाजा खाँदा भूलेर पनि नगर्नुहोस् यी ५ गल्ती, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
बिहानको खाजा खाँदा भूलेर पनि नगर्नुहोस् यी ५ गल्ती
ब्रेकफास्ट अर्थात बिहानको खाजा तपाइको शरीरको लागि महत्वपुर्ण मानिन्छ।तपाईलाई यो थाह नहोला कि बिहान को ब्रेकफास्ट छुटायो भने तपाइको तौलमा नराम्रो असर पर्दछ। यदि ब्रेकफास्ट खाने बानी गर्नुभएको छैन भने सुरु गर्नुहोस अाउदो बिहानी बाटै। पश्चिमी समाजमा सामान्य मानिने ब्रेकफास्ट हाम्रो लागि मात्र चिया खाने भनि बुझिन सक्छ।
चियालाइ मात्र ब्रेकफास्ट मानेर बिहान उठेर नियमित खानुपर्ने कुराहरु छुटाउने गर्ने नगरौं। के के गल्तिहरु हुन सक्छन त ब्रेकफास्टको तयारीको लागि?
फलफुलको जुस बनाएर नखाऔं
जब फलफुललाइ जुस बनाएर खाइन्छ तब यो प्रक्रियामा फलफुलको धेरै जस्तो भिटामिन र मिनरल्सहरु हराउछन। बरु फलफुल र पानी खाने गर्नुहोस, जुस बनाउन तिर लागेर शक्ति खर्च नगर्नुहोस।
क्याफिनको मात्रा याद गरौं
१ कप कफि वा चियाले तपाइको मुड फ्रेस बनाउन सक्छ, तर यसो भन्दैमा धेरै कप चिया वा कफि नखानुहोस। यसो गरेमा निद्रामा गडवडी हुने हुन्छ।
चिल्लो बढी भएको, वा कार्बोहाइड्रेड मात्र पाइने वा धेरै चकलेटहरु एकै चोटी खाने नगरौं। बरु सबैलाइ मिलाएर खाने गरेमा शरिरमा चाहिने सबैखाले भिटामिन तथा मिनरल्सहरुको परिपुर्ति हुन्छ।
ब्रेकफास्ट महत्वपुर्ण छैन भन्ने सोच
ब्रेकफास्ट खादाँ को गल्ति ४भोक लागेको छैन, अब एकैचोटी खाना नै खाने भनि नभन्नुहोस। ब्रेकफास्ट छोड्नाले तपाइको मेटाबोलिजममा कमि आउछ। त्यसैले सकेसम्म ब्रेकफास्ट गर्न नछोडौं।
पानी पनि महत्वपुर्णपानी पनि महत्वपुर्ण
ब्रेकफास्ट को अगाडी पानी खाने बानी गर्नुहोस। पानी खानाले तपाइलाइ डिहाइड्रेसनबाट बचाउँछ। र ग्यास्ट्रिकको समस्याको लागि पनि पानी एकदमै महत्वपुर्ण मानिन्छ।